PRIYANKA CHOPRA အသက်၊ အမြင့်၊ ရည်းစား၊ ခင်ပွန်း၊ မိသားစု၊ - ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီး
Priyanka Chopra အသက်၊ အမြင့်၊ ရည်းစား၊ ခင်ပွန်း၊ မိသားစု၊
နာမည်ပြောင် (များ) Piggy Chops, Sunshine, Mimi, PC
အလုပ်အကိုင် မင်းသမီး, မော်ဒယ်, အဆိုတော်
အမြင့် စင်တီမီတာမှာ ၁၆၉ စင်တီမီတာ
မီတာဖြင့် ၁.၆၉ မီတာ
လက်မအတွင်း ၅ '၆½ '
အလေးချိန် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ကီလိုဂရမ် 55 ကီလိုဂရမ်
ပေါင်မှာ 121 ပေါင်
ပုံတိုင်းတာမှုများ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) 35-28-35
မွေးနေ့ ၁၈ ဇူလိုင် ၁၉၈၂
အသက် (2019 ၌ကဲ့သို့) ၃၇ နှစ်
မွေးရပ်မြေ Jamshedpur, Jharkhand, အိန္ဒိယ
ဇာတိမြို့ Bareilly, Uttar Pradesh, အိန္ဒိယ
ကျောင်း la Martiniere မိန်းကလေးများကျောင်း, Lucknow
စိန့်မာရီယာ Goretti ကောလိပ်, Bareilly
Cedar Rapids, Lowa ရှိဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီအထက်တန်းကျောင်း
ကောလိပ် Jai Hind ကောလိပ်နှင့် Basant Singh သိပ္ပံသိပ္ပံ၊ မွန်ဘိုင်း
အချစ် ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Thamizhan (၂၀၀၂၊ တမီးလ်ရုပ်ရှင်)၊ သူရဲကောင်း - သူလျှိုတစ် ဦး ၏မေတ္တာပုံပြင် (၂၀၀၃၊ ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်)
တီဗီပွဲ ဦး ထွက် ကြောက်စရာအချက် - Khatron Ke Khiladi (၂၀၁၀၊ အိမ်ရှင်အဖြစ်)
ပွဲ ဦး ထွက်သီချင်း Ullathai Killathe (၂၀၀၂၊ တမီးလ်ရုပ်ရှင် - သမီဇန်)
မိသားစု ဖခင် - နှောင်းပိုင်း Ashok Chopra (အိန္ဒိယကြည်းတပ်မှဆရာဝန်)
အမေ - Madhu Chopra (အိန္ဒိယကြည်းတပ်မှဆရာဝန်)
အစ်ကို - Siddharth Chopra (လူငယ်)
နှမ - N / A
လိပ်စာ Lokhandwala ရှုပ်ထွေးသော Green Acres၊ မွန်ဘိုင်း Andheri
ဝါသနာ သီချင်းဆိုခြင်း၊ ကဗျာရေးခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံပညာ
အငြင်းပွားမှုများ • Akshay Kumar နှင့်သူမနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်ဟုကောလာဟလများကြားပြီးနောက်သူနှင့် Akshay Kumar တို့သည် Waqt ၏ post ကိုအတူတကွလက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
• Shah Rukh Khan နှင့်သူမအပေါ်စွပ်စွဲချက်များကြောင့်မီးများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ Shah Rukh ဟာ Priyanka ကိုအထူးကုသမှုပေးတဲ့အချိန်မှာသူမကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့သူ့ကိုအကြံပေးတဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတာပါ။ ထို့အပြင်သူမ၏ Shah Rukh ၏အိမ်တော် Mannat သို့ပုံမှန်လည်ပတ်မှုများနှင့်အခြားသောဖြစ်ရပ်များတွင်လည်းသူ၏ဇနီးသည်အားပြက်ရယ်ပြုခဲ့သည် Gauri Khan ။ ဤအဖြစ်အပျက်များအားလုံးပြီးနောက် Gauri ကသူမ၏ခင်ပွန်း Priyanka နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မလိုတော့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်နှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အလုပ်လုပ်ရန်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။
သူမဟာ Maxim India မျက်နှာဖုံးမှာသူမရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမင်းသမီးကအပြစ်တင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့ဝေမျှပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့လှပမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူမရဲ့လက်မောင်းလေးများဟာ underarm wrinkles မပါဘဲ photoshopped လို့ထင်ရသည်။
•သူမသည်လူရွှင်တော်နှင့်တွစ်တာတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည် Tanmay bhat သူမလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်အခြားသူများကဲ့သို့ပင်သူမ၏ဝဲကဲ့ရဲ့ပြီးနောက်။ 'ငါသည်ငါ့ ဦး ခေါင်း၌ @ priyankachopra ရဲ့နာမကိုအမှီပြောသောအခါငါယခု' Priyaaaanka Chopruh 'ကဲ့သို့အလိုအလျှောက်အသံထွက်' ဟုသူက Tweet လုပ်ခဲ့
• ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတီဗီအစီအစဉ်ဖြစ်သော Quantico တွင်ပါရီယာကာသည်အိန္ဒိယ - ပါကစ္စတန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်တွင်မန်ဟက်တန်၌နျူကလီးယားလက်နက်များရပ်တန့်စေသောအကြမ်းဖက်သမားဆန့်ကျင်ရေးအရာရှိတစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရအိန္ဒိယအမျိုးသားရေးဝါဒီများကပါကစ္စတန်အားနျူကလီးယားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရန်သံသယရှိသူတစ် ဦး ၏လည်ပင်း၌ဘာသာရေးဟိန္ဒူသင်္ကေတဖြစ်သော Rudraksh ပုတီးသီးကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အိန္ဒိယအများစုကအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ပုံရိပ်ကိုယိုယွင်းပျက်စီးစေသောကြောင့် Priyanka ကိုအိန္ဒိယလူမျိုးများကရှုံ့ချခဲ့သည်။ သူမရဲ့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ဖို့တိုင်းတာချက်အနေနဲ့သူမရဲ့တွစ်တာလက်ကိုင်ကိုယူပြီးတောင်းပန်ခဲ့တယ်။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာများ Risotto, ဘာဂါ, ပြင်သစ်ကြော်, ကြက်သား / အသားတင် Biryani, ငါးဟင်း, Sarson ka saag, Bourbon ဘီစကစ်, အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်
အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင် (များ) မMဲ Mcconaughey, Tom Hardy, Mel Gibson, Shah Rukh Khan Kishore Kumar နှင့် Dharmendra
အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး Rekha နှင့် Sushmita Sen
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင် (များ) ဘောလီဝုဒ်: Dilwale Dulhania Le Jayenge, Mujhse Shaadi Karogi
ဟောလိဝုဒ် Jerry Maguire၊ လှပသောအမျိုးသမီး၊
အကြိုက်ဆုံးသီချင်း (များ) Sarah Washington မှ 'ငါသတိမရှိသောတီးတိုးများ'၊
အကြိုက်ဆုံးစာအုပ် (များ) ဝီလျံရှိတ်စပီးယားမှ Romeo နှင့် Juliet၊ Sidney Sheldon မှသင်၏အိပ်မက်များကိုပြောပြပါ။ Jawaharlal နေရူး၏ဖခင်ထံမှသမီးထံပေးစာ။
အကြိုက်ဆုံးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Prabal Gurung
အကြိုက်ဆုံးရေမွှေး Ralph Lauren Romance
အကြိုက်ဆုံးနေရာ ပဲရစ်၊ ဘရာဇီးနှင့်မက္ကဆီကို
ရေးရာ / ရည်းစား Aseem ကုန်သည် (ပုံစံ)
Akshay Kumar (မင်းသား)
Shah Rukh Khan (မင်းသား၊ ကောလာဟလ)
နစ်ခ်ဂျိုနပ်စ် (အဆိုတော် - တေးရေးဆရာ)
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုနေ့စွဲ ၁၈ သြဂုတ် ၂၀၁၈
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၈ (ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ)
ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၈ (ဟိန္ဒူထုံးတမ်းစဉ်လာအရ)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရာဌာန Jodhpur ရှိ Umaid Bhawan နန်းတော်
ခင်ပွန်း / ဇနီး Nick Jonas (။ ။ ၂၀၁၈ - လက်ရှိ)
ကားများစုဆောင်းခြင်း Rolls Royce Ghost၊ Porsche Cayenne၊ Mercedes Benz E Class နှင့် BMW7Series
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) -10 9-10 ကု-10ေ / ရုပ်ရှင်
တီဗီရှိုးအတွက် US $4million / တစ်နှစ်
ဝင်ငွေ (၂၀၁၈ တွင်ကဲ့သို့) ₹ 18 ကုreေ / တနှစ်  Forbes မဂ္ဂဇင်း
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ဒေါ်လာ ၃၂ သန်း
Priyanka Chopra နှင့် ပတ်သက်၍ လူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Priyanka Chopra ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား
Priyanka Chopra ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
Priyanka Chopra သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
သူမ၏မိဘများကိုအိန္ဒိယကြည်းတပ်မှဆရာဝန်များကဲ့သို့ Priyanka ကိုဆေးသမားမိသားစုတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
သူမ၏မိဘ၏ပုံမှန်လွှဲပြောင်းမှုကြောင့် Bareilly, Lucknow, Delhi, Pune, Ladakh, Chandigarh, Ambala နှင့် Mumbai စသည့်နေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးပြီးနောက်သူမအနိုင်ရခဲ့သော“ မေဘုရင်မ” အမည်ရှိဒေသခံအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင်သူသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် Femina Miss India ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုတွင် Shah Rukh Khan သည်တရားသူကြီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Jr ntr Hindi ဟုအမည်ပေးထားသည့်ရုပ်ရှင် free download,
prabhas နှင့် kajal agarwal ရုပ်ရှင်စာရင်း
သူမသည်ရာဇ ၀ တ်မှုစိတ်ပညာဖြင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းပြုလိုသော်လည်း Miss India ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိပြီးနောက်သူသည်ရုပ်ရှင်ကမ်းလှမ်းမှုများစွာရရှိသောကြောင့်စိတ်ကူးကိုပယ်ချခဲ့သည်။
လူအတော်များများကသူမသည်သူမ၏ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုထင်ကြသည် သူရဲကောင်း - သူလျှိုတစ်ယောက်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း (၂၀၀၃)၊ သို့သော်သူမသည်တီးလ်ရုပ်ရှင်ကားဖြင့်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် သမာဓိ (2003) ။
သူမသည်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူသူမ၏ဘောလီးဝုဒ်တွင်ပွဲ ဦး ထွက်လုပ်ရန်ထင်ခဲ့သည် Ek Haseena Ek Deewana, ဆန့်ကျင်ဘက် Govinda , ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်စင်ပေါ်ရတယ်။
အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် Abhishek Bachchan သူမ၏အမည်ကိုပေးသောသူ Piggy Chops ရုပ်ရှင်၏ရိုက်ကူးနေစဉ် ချစ်သူ။
Parineeti chopra , Meera Chopra နှင့် Barbie Handa တို့သည် Bollywood ရှိသရုပ်ဆောင်များဖြစ်သောသူမ၏ဝမ်းကွဲညီမများဖြစ်သည်။
သူသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Umrao Jaan အတွက်မူရင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းသူမ၏အလုပ်များသောအချိန်ကြောင့်အခန်းကဏ္ done မှပါဝင်ခဲ့သည် Aishwarya Rai Bachchan ။
သူမသည်သူမ၏ '' ဖက်ရှင် '(၂၀၀၈) ရုပ်ရှင်အတွက်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
သူသည်ရုပ်ရှင်၌ (ကွဲပြားခြားနားသောနိမိတ်လက္ခဏာများအတွက်) ဇာတ်ကောင် ၁၂ မျိုးကစားခဲ့သည် သင်၏ Raashee ကဘာလဲ? (၂၀၀၉) ။
သင်၏ Raashee ကဘာလဲဆိုတာအတွက် Priyanka Chopra
သူမသည်အနောက်တိုင်းဂန္ထဝင်ဂီတတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားသောအဆိုတော်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ငါ့စီးတီး စက်တင်ဘာလ 2012 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်၌တည်၏။
သူမသည်ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင် Gerard Butler နှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်သည်။
သူမသည် gadget မထင်မှတ်သောအရာများဖြစ်ပြီးကင်မရာများစုဆောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
သူမသည်အဘယ်သူ၏ခြေထောက်စှဲအီတလီနာမည်ကြီး Salvatore Ferragamo ပြတိုက်အတွက်ယူခဲ့ပါတယ်ပထမ ဦး ဆုံးအိန္ဒိယမင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။
Salvatore Ferragamo ပြတိုက်မှ Priyanka Chopra
သူမသည်တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူဖြစ်ပြီး Ranchi's Birsa ဇီဝဥယျာဉ်တွင်နေထိုင်သောကျားမ Durga နှင့်ခြင်္သေ့ Sundari ကိုမွေးစားခဲ့သည်။
သူမသည်လက်မှတ်ထိုးအပေါ်သံသယဖြစ်ခဲ့သည် Quantico ၎င်း၏ရှည်လျားသောကြာချိန်ကြောင့် 2015 ခုနှစ်တွင်။
လက်ထပ်ပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Priyanka နှင့် Nick တို့သည် Simpsons ရုပ်ပြောင်များကို“ The Simpsons” သရုပ်ဖော် Stefano Monda နှင့် Rino Russo တို့မှရရှိခဲ့သည်။
Priyanka Chopra နှင့်နစ်ခ်ယောန၏ Simpsons ရုပ်ပြောင်များ
သူမမှာ Diana ဆိုတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးရှိတယ်။ သူမ၏ခွေး Diana တွင်လည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောနောက်လိုက်များပါသည့် Instagram စာမျက်နှာရှိသည်။
မင်းကနောက်တစ်ခါပြန်လှည့်နေတယ်ဆိုရင် .. ကြည့်နေတယ် .. crap! နောက်မှရနိုင်မယ်လို့စိတ်မထားနဲ့ #WednesdayWisdom
မျှဝေသည် ဒိုင်ယာနာ Chopra 7:19 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 17, 2019 ရက်တွင် (@diariesofdiana)
↑၁ Forbes မဂ္ဂဇင်း
ဇနီးနှင့်အတူ umesh yadav
dhyan Chand သောအခါဘယ်အချိန်မှာမွေးဖွားခဲ့သည်
အိန္ဒိယရုပ်ပုံတွင် shraddha pandit
Ajay devgan မိသားစုများ၏ရုပ်ပုံများ